Hery Rajaonarimampianina : « Mihazakazaka ny fampandrosoana an’i Madagasikara » -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : « Mihazakazaka ny fampandrosoana an’i Madagasikara »
Natomboka aty amin’ny Faritra Atsimo Andrefana ny fampandrosoana an’i Madagasikara, raha ny nambaran’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina nandritra ny lahateniny tamin’ny fitsidihana sy fanolorana ny ampahany vita amin’ny Lalam-pirenena fahasivy (RN-9) mampitohy an’i Toliary sy Mahabo.
« Mihazakazaka ny fampandrosoana an’i Madagasikara. Raha lalana natao adin’ny roa tamin’izany fotoana mantsy, vita ao anatin’ny 20 mn izany ankehitriny. Hitanareo amin’izany ny hafainganam-pandehantsika amin’ny fampandrosoana ity firenentsika ity. Raha toa ka hijery sy hanamarina izany, mitodiha aty Atsimo Andrefana fa aty no ahitana an’izany. Tsy hijanona eo anefa izany fa hihitatra amina faritra maro manerana ny Nosy », hoy ny Filoham-pirenena.
Nohamafisiny fa maro ny fotodrafitrasa napetraka sy mbola hapetraka ao amin’ny faritra Atsimo. Anisan’izany ny fotodrafitrasa fototra hampandrosoana, toy ny lakandrano, ny barazy, ny lalàna, sns. « Tsindriako eto fa mila mifanome tanana isika raha te-hampandroso haingana an’ity firenentsika ity. Mila mifanentana ihany koa ka tsy hiandry ny hafa intsony ary tsy hiankin-doha intsony amin’ny fampandrosoana ny firenena. Amin’izany fampandrosoana izany indrindra no handehanako any ivelany handresy lahatra ireo mpamatsy vola ho avy eto Madagasikara », hoy hatrany ny Filoha.
Asa no hifaninanana
Nanindrom-paingotra ireo mpanohitra sy manenjika ny Fitondram-panjakana ihany koa ny Filoham-pirenena tamin’izany. Nambarany ampahibemaso fa ny asa no hifaninanana fa tsy resaka an-databatra fotsiny ihany. « Any anatin’ny asa isika no mifaninana fa tsy hifanenjika sy hifanaraby lava eto. Misy amin’ireo olona faly hanenjika fotsiny ihany nefa tsy nahavita na dia iray metatra amina Lalam-pirenena aza », hoy ny Filoha Hery Rajaonarimampianina.
« Mila manaporofo amin’ny vahoaka isika fa miasa ary mitondra fampandrosoana an’ity firenentsika ity. Voaporofo izy izao fa miasa ny Fitondram-panjakana izay tarihiko. Maro ireo fotodrafitrasa natsangana ary anisan’ny nitondrana volabe indrindra amin’izany ny Faritra Atsimo Andrefana. Samy hahazo ny anjarany ihany koa anefa ireo faritra hafa », hoy hatrany ny Filoha.
Ankoatra izay, notsindrian’ny Filoham-pirenena mafy fa mila resena lahatra ny vahoaka amin’ny alalan’ny asa fampandrosoana « Aoka ny vahoaka no hitsara amin’ny asa vita. Izy ireo ihany no afaka mitsara », hoy izy teny am-pamaranana.